MSc MSN na Geographic Information Systems
O doro anya, nke a bụ otu n'ime ihe ndị ọzọ kachasị mma maka ndị isi ntanetị na-etinye aka na mpaghara geospatial, na karịa ihe niile a na-arụ na Spanish. The Postgraduate Program MSc (GIS) –Master of Science (Geographical Information Science & Systems), nke enyere na Universität Salzburg, Austria, site na Ngalaba nke Geoinformatics - Z_GIS, bụ…
Akụziri CAD / GIS, Apụta
Master in Urban Design and Planning [UJCV]
Nke a bụ otu n'ime ogo mmụta kachasị amasị na mpaghara Central America, na-atụle mkpa ọ dị maka gọọmentị ime obodo na ngwa ngwa a na-apụghị ịgbagha agbagha nke usoro ọzụzụ metụtara njikwa nke ókèala n'okpuru usoro mmepe mmadụ. Ọ na-abịa n'oge na-atọ ụtọ, mgbe Mahadum José Cecilio del Valle na-emegharị ya ...
Akụziri CAD / GIS, innovations, Land Management
Ijikọ ọha mmadụ - Geomatics Isiokwu maka International Informatics Fair 2016
Obi dị anyị ezigbo ụtọ ịkpọsa na Kọmitii Na-ahazi nke IX International Congress nke GEOMÁTICA 2016 ekwuputala usoro nke XVI International Informatics Convention na Fair maka afọ na-esote. Ihe omume a ga - eme na Havana, site na Machị 14 ruo 18 na isi okwu bụ "Ijikọ ọha na eze". N'ime isiokwu ...
Akụziri CAD / GIS, innovations
Nna-ukwu na Atụmatụ Territorial nke UNAH
Nzere masta na njikwa ala nke National University nke Honduras (UNAH) nyere, bụ mmemme agụmakwụkwọ na, kemgbe e kere ya na 2005, esorola ya na Ngalaba Geography nke Mahadum Alcalá (Spain) . N'ihi ajụjụ a bịakwutere anyị ụbọchị ole na ole gara aga, anyị ji ohere ahụ ...
Akụziri CAD / GIS, Land Management
Guatemala na ihe ịma aka ya ịchọta ọrụ nke Academylọ Akwụkwọ na Territorial Management
Ngalaba Sayensị na Nkà na ofzụ nke Mahadum San Carlos nke Guatemala bụ ezigbo ihe atụ nke ọrụ agụmakwụkwọ ga-eme iji mee ka ọrụ ahụ na-aga n'ihu na njikwa mpaghara. Nke a bụ ọrụ siri ike nke na-aga n'ihu nwayọ nwayọ, mana mgbe nyochachara m mere afọ atọ gara aga, ọ bụ ...
Cartografia, cadastre, Akụziri CAD / GIS